Al-Shabaab oo ku hanjabtay inay Weerar ku soo qaadayaan Somaliland & jawaabta Xukuumadda | Somaliland.Org
Al-Shabaab oo ku hanjabtay inay Weerar ku soo qaadayaan Somaliland & jawaabta Xukuumadda
October 31, 2009	Muqdisho (Somaliland.Org)- Kooxda Al-Shabaab ayaa ku hanjabtay inay Weeraro ku soo qaadayaan Somaliland iyo qaar badan oo ka mid ah dalalka Mandaqadda Geeska Afrika ee la deriska ah, maalin ka dib markii Madaxweyne Rayaale sheegay in Afkaar ahaan laga hortego Kooxdaas. Waxaana hanjabaaddaas jawaab ka bixiyay Taliyaha guud ee Ciidamada Booliska Somaliland.
Qaar ka mid ah hoggaanka Kooxda Al-Shabaab oo ka hadlay Isu-soo-bax ay soo qaban-qaabisay Kooxda Al-Shabaab, lagagana horjeeday tallaabo ay Dawladda Yuhuuddu ku qabsatay Masjidka Baytal-Maqdis ee Falastiin oo shalay ka dhacay Magaalada Marka ee Gobolka Shabeellaha hoose ee Soomaaliya, ayaa ku hanjabay in ay weerar ku soo qaadi doonaan Somaliland iyo dalalka la deriska ah.
Sida aanu ka soo xiganay Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA, Maxamed Aala-Maxamed oo ka mid ahaa Masuuliyiinta u hadlay Kooxda Al-Shabaab, ayaa ku andacooday in ay Kooxdoodu gacanta ku hayso 10 Gobol oo ka mid ah 18-kii gobol ee dalkii laysku odhan jiray Soomaaliya, isla markaana ay qorsheeyeen in ay Weeraro ku qaadaan inta hadhay oo Somaliland ka mid tahay. “Siddeeda gobol ee kale ee hadhay u sheega in aanu soo socono, waanu soo soconaa. Ha loo sheego Puntland in aanu soo socono, ha loo sheego Somaliland in aanu soo socono, hana loo sheego Shacabka Jabuuti in aanu soo socono.” Ayuu yidhi Ninkan u hadlay Al-Shabaab, waxaanu intaa ku daray in dalalka kale ee Geeska Afrika oo ay Ereteriya ka mid tahay ay iyana weerar ku qaadi doonaan. “Qolada kale ee la deriska ah (Jabuuti) ee Itoobiyaanka ah, ha loo sheego in aanu soo socono. Sidoo kale, Ereteriya iyo Sudan ha loo sheego iyana in aanu soo socono. Ghana ha loo sheego in aanu soo socono, Burundi iyo Uganda ha loo sheego iyana in aanu soo socono. Qolada iyana la yidhaahdo Kenya, iyana waanu soo soconaa. Geeska Afrika oo dhan ha la gaadhsiiyo in aanu soo socono.”
Dhinaca kale, Taliyaha guud ee Ciidamada Booliska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubbad, ayaa hanjabaaddan ka jawaabay. Waxaanu sheegay in ay mar walba diyaar u yihiin difaaca cadow kasta oo waxyeello la maaga Somaliland. “Anaga waa isugu kaaya mid cadowgu, ama kuwaas (Al-Shabaab) ha ahaadaan ama kuwo kale ha ahaadaane. Waxaana anaga nala gudboon in aanu qaadano wax loo yaqaan taxaddir oo aanu ka sii taxaddirno oo aanu u diyaar garowno, taana diyaar baanu u nahay.” Ayuu yidhi Maxamed Saqadhi Dubbad.
Hanjabaaddan Al-Shabaab ayaa ku soo beegantay maalin ka dib markii Madaxweyne Rayaale Xuskii sanad-guurada 1aad ee Qaraxyadii lala beegsaday Hargeysa ee 29 October 2008 uu ka sheegay in loo baahan yahay in Dagaal Afkaar ku dhisan lala galo Kooxaha ficillada Is-qarxinta maleega ee fuliya ee ay Al-Shabaab ka mid tahay. Taas oo uu Waalidiinta reer Somaliland ugu baaqay inay Ubadkooda ka war-hayaan, isla markaana la socdaan Waxbarashadooda.